Showing ९१-१०० of ६५२ items.
अरुलाई पेट मिचीमिची हँसाउने मान्छे डाँको छोडेर धुरुधुरु रोए । हँसाउने मान्छेले रुनै हुँदैन थियो भनेझैं गरी मदनकृष्ण रोए भनेर हल्ला भयो । यूट्युब र सामाजिक सञ्जालमा मदनकृष्ण रोएको दृश्य भाइरल नै बन्यो । सधैं हँसाइराख्ने, हाँसिरहने मान्छे रोएको देखेर अरुको पनि आँखा रसायो । सबैका आँखा रसाउनेगरी रोएका मदनकृष्णले आँसु पुछ्दै फेसबुकमा चार हरफको कविता कोरे : सबैले माया मारेर केभो तिमी छँदैछौ नि मलाई प्यार गर्ने तिमीले पनि माया दिन नभ्याउँदा आँसु छँदैछ नि मलाई स्यार गर्ने सबैको मनमा बस्न सफल भएका मदनकृष्णलाई माया मार्न सक्ने त कोही थिएनन् र छैनन् । तर जीवनसंगीले दिनेजस्तो माया अरुबाट मिल्न पनि गा
मदनकृष्णकी श्रीमतीको किरिया ५ दिन मात्रै
वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठकी जीवन संगीनी यशोदा सुवेदीको सोमबार राती निधन भयो । क्यान्सरबाट पिडित यशोदाको निधन भएसंगै मंगलबार पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार पनि भईसकेको छ । एक छोरा र एक छोरीको अभिभावक मदनकृष्णले श्रीमतीको किरिया ५ दिन मात्र गर्ने भएका छन् । कलाकारहरु समाज परिवर्तनका संवाहक भएकोले पनि सकरात्मक संन्देश दिनको लागि पारिवारिक सहमतीमा नै यशोदाको काजक्रिया १३ दिन नभई ५ दिन मात्र हुने भएको हो ।मदनकृष्णले चलिआएको १३ दिने किरियाबस्ने परम्परालाई परिवर्तन गर्ने हेतुले ५ दिन मात्र किरिया गर्ने भएपछि मृत्यु संस्कारको १३ दिने कर्मलाई छोटो बनाउन अभियान चलाई रहेकाहरुलाई पनि सहयोग पुर्याएक
आइटम गीतमा प्रतिवन्ध लगाउन कंगनाको माग
बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौत मनमा लागेको कुनै पनि कुरा बेहिच्किचाहट बोलिदिन्छिन् । यस्तो स्वभावले गर्दा उनी बेलावखत विवादमा पनि पर्ने गरेकी छिन् । हालै उनले चलचित्रमा समावेश हुने गरेको आइटम गीतको विरोधमा मुख खोलेकी छिन् । यस्ता आइटम गीतहरुले समाजमा विकृति ल्याएकाले पूर्णरुपमा प्रतिवन्ध लगाइनुपर्ने उनको माग छ । एक अन्तरवार्तामा कंगनाले अहिलेसम्म आफूले आइटम नम्बर नगरेको र अब पनि नगर्ने बताइन् । कडा शब्दमा उनले भनिन्, ‘आइटम नम्बरमा त्यस्तो के हुन्छ र गर्न लायक ? खाली महिला कलाकारलाई नंग्याएर अश्लिलता फैलाएर दर्शक तान्ने मेलो मात्र हो यो ।’ अगाडि उनले थपिन्, ‘म यस्तो कुनै पनि कुराको हिस्सा बन्न स
बलिउडका दुई चर्चित स्टारकिड्स सारा अली खान र जान्हवी कपुर यसै वर्ष फिल्ममा डेब्यू गर्दैछन् । र, अहिलेबाटै उनीहरुलाई सम्भावित प्रतिस्पर्धिको रुपमा हेरिएको छ । साराले ‘केदारनाथ’ बाट र जान्हवीले ‘धडक’ बाट बलिउडमा इन्ट्री मार्न लागेका हुन् । दुवै फिल्मको सुटिङ धमाधम भइरहेको छ । यसैबीच खबर आएको छ कि जान्हवीको सानो गल्तिले गर्दा एउटा ठूलो फिल्म उनको हातबाट फुत्केको छ र सारालाई चिठ्ठा परेको छ । भर्खरै घोषणा भएको फिल्म ‘सिम्बा’ मा जान्हभीले रणवीर सिंहको अपोजिटमा अभिनय गर्ने लगभग तय भएको थियो । साइन हुन मात्र बाँकी थियो । फुर्किएकी जान्हवीले यो खबर मिडियामा लिक गरिदिइन् । साथै, रणवीर सिंह जस्तो सुपरस
पत्नी वियोगमा परेका मदनकृष्णले लेखे : आँसु छँदैछ नि मलाई स्याहार गर्ने
काठमाडौं । सोमबार राति उपचारको क्रममा हाँस्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठकी पत्नी यशोदा सुवेदीको निधन भएको छ । लामो समयदेखि क्यान्सरबाट पीडित यशोदाको मंगलबार आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ । उहाँको पार्थिव शरीरमा छोरा यमन श्रेष्ठले दागबत्ती दिनुभएको थियो । सुवेदीको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिनका लागि आर्यघाटमा सयौँको उपस्थिति रहेको थियो । पत्नी वियोगबाट विक्षिप्त बन्नुभएका मदनकृष्ण श्रेष्ठले फेसबुकमा आफूलाई सधैँ माया गर्ने पत्नी यशोदाले छाडेर गए पनि स्याहार गर्ने आँसु छँदैछ नि भन्नुभएकाे छ । सबैले माया मारेर केभो तिमी छँदैछौ नि मलाई प्यार गर्ने तिमीले पनि माया दिन नभ्याउँदा आँस
“आशिकी ३” मा बरुण र आलिया ?
बलिउडको सफल फ्रेन्चाईजमा पर्ने फिल्म हो आशिकी । सन् १९९० मा ‘आशिकी’ , सन् २०१३ मा ‘आशिकी २’ को सफलतापछि निर्माण युनिटले ‘आशिकी ३’ को घोषणा गरिसकेको छ । भट्ट क्याम्पमा निर्माण हुने यो फिल्म पछिल्लो समय स्टारकास्टको कारण पनि चर्चामा रहेको थियो । सुरुवातमा ‘आशिकी ३’ का लागि आलिया भट्ट र सिद्धार्थ मलहोत्राको नाम चर्चामा रहेको थियो । तर पछिल्लो केही दिन यता ‘आशिकी ३’ मा सिद्धार्थ नभई बरुण धवन अनुबन्धित भएको भारतीय मिडियाहरुले दाबी गरेका छन् । प्रेम सम्बन्धको रुपमा आलिया र सिद्धार्थको नाम जोडिने भएपनि पर्दामा भने आलियाको जोडी बरुणसंग निकै रुचाईएको छ । यो जोडीलाई पर्दामा हेर्न चाहाने र यो जोडीको फ्
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा राजेश हमाल पनि
कुनै समय एमालेको समर्थन गर्दे हिडेका महानायक राजेश हमालको पछिल्लो समय निकटता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग देखिँदै आएको छ । चुनाव लगत्तै केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएसंगै भेट्न समेत गएका राजेश हमाल प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सहभागी हुने भएका छन् । केही दिन अगाडीमात्र फान अवार्डमा सहभागी हुनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफनो भारत भ्रमण नेपाली चलचित्रकर्मीहरु पनि हुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले कलाकारहरुका लागि आयोजना गरेको दिवाभोजमा सहभागी भएका थिए । सोही बमोजिम राजेश हमाल र निर्देशक दिनेश डिसीको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पक्का भएको बुझिएको छ । नरेन्द« मोदीको निमन्त्रणामा भारत ज
काठमाडौं । वरिष्ठ हाँस्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई पत्नीशोक परेको छ । मदनकृष्ण श्रेष्ठकी पत्नी यशोदा श्रेष्ठको सोमवार बेलुका ११ बजे निधन भएको परिवारका सदस्यले जानकारी दिए । लामो समयदेखि क्यान्सर रोगले पीडित यशोदाको उपचारको क्रममा हरिसिद्धिस्थित क्यान्सर हस्पिटलमा निधन भएको थियो । क्यान्सरले पीडित यशोधाको पछिल्लो समय दुवै खुट्टा नचल्ने भएको थियो । उनको विहान नौबजे पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिने भएको छ । उनका एक छोरा, एक छोरी छन् ।